LAHATSARY: ‘Tsy Manana Afenina’ — Izany Tokoa Ve? #TheDayWeFightBack · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2014 13:36 GMT
“Raha tsy manan-javatra afenina ianao, dia tokony azo alaina sary ao amin'ny efitra fatorianao sy fidiovanao” hoy i Jérémie Zimmermann, avy ao amin'ny vondrona Frantsay mpiaro ny zo nomerika La Quadrature du Net, nilaza tao anaty hira niarahany tamin'i La Parisienne Libérée, izay mibilaogy ao amin'ny Mediapart.
Ao amin'ity hira mahasodoka ity zy roa no manazava ireo voka-dratsin'ny fanarahamaso manerantany apetraky ny NSA amin'ny alalan'ireo tahirin-kevitry ny tsirairay manokana, notrohana sy nafindran'ny Facebook, Google sy ny tranonkala mitovy amin'izy ireo amin'ny fiainana manokana. Nampitandrina i Zimmerman:
Ny filazanao amin'ny tenanao hoe « tsy manan-javatra hanomeza-tsiny ny tenako aho, ka noho izany tsy manan-javatra afenina» dia tsy mahafantatra tanteraka izay zava-misy manoloana ny fanarahamaso faobe ataon'ny NSA ao anatin'ny ambaratonga telon'ny fisarahana. Raha mifandray amin'ny olona iray ianao, ary io olona io manana fifandraisana amin'ny olon-kafa – izay mety hoe rahalahy na anadahy tsy nifankahita taminy nandritra ny fotoana ela, ary lehilahy manao volombava ahiahiana ho manao asa fampihorohoroana, amin'izay fotoana izay dia mety efa tsikilovin'ny NSA ny fifandraisanao amin'ny alalan'ny mailaka, ny fisianao ao amin'ny aterineto, ny antso an-tariby, ny somaisonao (SMS) rehetra.
Amin'ny teny Frantsay, manana dika an-tsoratra amin'ny teny Anglisy sy Espaniola ny lahatsary.